Soo -saaraha Kubadda naxaasta ee Shiinaha iyo Alaab -qeybiye | Lixin
Waxaan leenahay waayo -aragnimo sannado badan ah oo ku saabsan soo saarista kubbadaha naxaasta iyo naxaasta ah.
Kubadaha naxaasta ahi waxay siiyaan iska caabin aad u fiican oo daxalka biyaha, waxayna aad uga jaban yihiin qiimaha kubbadaha kale ee iska caabbinta daxalka. Kubadaha naxaasta ah ayaa badanaa loo adeegsadaa noocyo badan oo ka mid ah codsiyada waalka ee u baahan kubadaha cabbirka yar.
Ku dhawaad ​​kubbadaha naxaasta ah ee saafiga ah ayaa badiyaa loo adeegsadaa codsiyada galvaniga iyo berrinka warshadaha elektiroonigga ah. Kubbadda naxaasku waa jilicsan tahay markaa way fududahay in la qodo, ka dibna sida caadiga ah waxaa loo adeegsadaa waalka, irbadaha shidaalka, buufinta, cabbirrada cadaadiska, mitirka biyaha, nidaamka gudbinta, dahabka, jijimadda, hilqadaha, silsiladaha, barta taabashada iyo bakhaarka farshaxanka.
Kubadda naxaasta Iska caabbinta daxalka ee biyaha la cabbo, biyaha naxaasiga ah, biyaha badda (marka laga reebo heerka socodka sare), jawiga milixda, badeecooyinka batroolka, khamriga. Iska caabin cadaalad ah marka loo eego aashitada iyo alkaliinta. Kama hor istaagto taabashada hydroxides, cyanides, acids oxidizing. Sida caadiga ah, iska -caabbinta daxalka ayaa hoos u dhacda marka maadada zinc ay kordho.
Kubadda Copper Iska caabinta daxalka wanaagsan ee jawiyada badda iyo warshadaha, uumiga, alkali, xalka milixda ee dhexdhexaadka ah. Kama horjoogsadaan taabashada aashitada oksaydhka, halogens, sulphides, ammonia, biyaha badda.
Hababka Baakadaha ee Kubadda Naxaasta iyo Kubadda Copper
1. Isticmaal laba lakab oo bacaha shaabadaysan ah iyo kartoonno yaryar, kuwaas oo ku habboon diridda shaybaarka. Miisaanku wuxuu ka yar yahay 10kg.
2. Waxaa lagu xardhay kaartoonno afar kartoon oo yaryar iyo bacaha shaabadaysan, oo miisaankoodu u dhexeeyo 10kg iyo 25kg.
3. Baakado ku duuban, oo ka kooban laba lakab oo bacaha la tolay ah iyo laba lakab oo bacaha shaabadaysan ah, oo miisaankoodu u dhexeeyo 25 kg iyo 40 kg.
4. Isticmaal qolof caag ah, ku rid 1 kubad meel kasta oo kaar ah, ka -fogaanshaha shilka. Waxay ku habboon tahay kubbadaha dhaadheer ee sarreeya iyo kubbadaha cabbirka weyn.
5. Waxaan xirxiri karnaa kubadaha sida waafaqsan codsigaaga.
Adeeg aad u fiican
Waxaan leenahay 24-saac shaqaale online ah, haddii aad u baahan tahay kubadaha, fadlan si xor ah ula xiriir shaqaalahayaga adeegga.
Waxaan haynaa kayd badan waxaanan ku rarri karnaa 1-2 maalmood. Haddii aysan jirin kubad bir ah oo aad u baahan tahay, waxaan u rarnaa 5-7 maalmood gudahood.
Waxaan nahay soosaarayaal, waxaan xaq u leenahay inaan dhoofino, waxaan ku siin karnaa qiimaha ugu hooseeya iyo tayada ugu fiican, waxaanan aqbali karnaa lacagta dalal badan.
Hore: Kubadda Aluminium
Xiga: Kubadda Copper
6.35mm 1/4 Kubad naxaas ah G200
9.525mm 3/8 Ball naxaas G200
H62 Kubadda Naxaasta
Kubadda naxaasta ee H65
H70 Kubadda Naxaasta
Kubad naxaas ah oo adag
Kubbadda Naxaasta ee Adag, Kubadda naxaasta, H62 Kubadda Naxaasta, Kubadaha Copper -ka Yar, Madax Ball Check naxaas, Kubadda naxaasta ee H65,